Trial Version များကို Cracklock ဖြင့် ထိန်းထားခြင်း [Tips & Tricks]
Myanmar IT Resource Forum » GENERAL TECHNOLOGY » » Reverse Engineering » Trial Version များကို Cracklock ဖြင့် ထိန်းထားခြင်း [Tips & Tricks]
1 Trial Version များကို Cracklock ဖြင့် ထိန်းထားခြင်း [Tips & Tricks] on 13th August 2010, 9:41 pm
ညီအစ်ကို တွေအတွက် ကျွန်တော် တခု တွေ့ထားတာလေးကို ဝေမျှပေးလိုက်ပါတယ်။
Trial Version တွေကိုလည်း Expired ဖြစ်မသွားအောင် ထ်ိန်းထားပေးနိုင်တဲ့ Software လေးဆိုလည်း
သူက Cracklock Manager လေးဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်က တော့ Kaspersky Antivirus Key Time Expired ဖြစ်မသွားအောင် ဒီ Appz လေးကိုအသုံးပြုထားပါတယ်။
Kaspersky ကိုလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ ပထမဆုံး Enable Self-Defense ကို Disable လုပ်ပါ။
နောက်တခု လက်ရှိသုံးနေတဲ့ Key ကို Delete လိုက်ပါ။
ပြီးရင် Kaspersky ကို Exit လိုက်ပါ။
အားလုံးလုပ်ပြီးသွားရင် ဒီ Patch File နဲ့ Kaspersky ကို ပြန်ပြီး Patch လုပ်လိုက်ပါဦး
ဘာလို့လုပ်ရတာလည်းဆိုတော့ Key Blacklist ရန်ကို ကာကွယ်နိုင်အောင်လို့ပါ။
1.Cracklock Manager ကို အရင် install လိုက်ပါ။ပြီးရင်သူ့ကို ဖွင့်လိုက်ပါ။
2. ဖွင့်ပြီးသွားရင် Add Program ကုို Double Click လိုက်ပါ။
3. အဲ့ အချိန်မှာတော့ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ Program ရဲ့ exe file လေးကိုရွေးလိုက်ပါတော့။
ကျွန်တော်က တော့ C:\_Program Files\_Kaspersky Lab\_Kaspersky Anti-Virus 7.0\_AVP ကို
ကိုယ်လုပ်ချင်တဲ့ application ကိုရွေးပြီးသွားရင်တော့ အောက်ကပုံအတိုင်းဖြစ်လာပါတယ်။
ဒီမှာတော့ ကျွန်တော့် Kasper key ရဲ့ Created Date ပေါ်မူတည်ပြီး
Crated Date ကို Key Viewer နဲ့ ကြည့်ပြီး
ကျွန်တော့် Key ရဲ့ Date က 28/3/2008
ဖြစ်လို့ ကျွန်တော်က ဒီ Date ကိုရွေးထားတာပါ။
ဆိုရင်တော့ ကိုယ်စပြီး Install တဲ့နေ့ရဲ့ Date ကိုရွေးလိုက်ပါ။
ပြီးသွားပြီ ဆိုရင်တော့ Injection mode Tab ကို သွားလိုက်ပါ။
4. Static injection.Choose which file to modify: ကိုရွေးပါ။ ပြီးရင် Apply > Ok လိုက်ပါတော့။
5.ကဲ… Kaspersky လေးရောက်လာပါပြီဗျာ…
အခု Cracklock program ထဲက Kaspersky လေးကို Right Click ပြီး Run လိုက်ပါတော့…….
ပြီးရင် Key ပြန်ထည့်ပါ ၊ Enable Self-Defense ကို Enable ပြန်လုပ်လိုက်
MIRT ညီအစ်ကို တွေဒီပုံစံလေးအတိုင်း အခြား program တွေကို
Last edited by omiga on 13th October 2010, 12:02 pm; edited 1 time in total
2 Re: Trial Version များကို Cracklock ဖြင့် ထိန်းထားခြင်း [Tips & Tricks] on 14th August 2010, 12:06 am
ဘယ်နှစ်ခေါက် ပေးဝင် မယ် ဆိုတဲ့ Program တွေရော ရလား မသိဘူး
ဆိုလိုတာက Install လုပ်ပြီးသွားပြီး နောက်ပိုင်း ၅ ခေါက် Free ပေးဝင်မယ် နောက်ကျတော့ buy ဖြစ်သွားတဲ့ ဟာမျိုးတွေကို ရော လုပ်ပေးထားလို့ ရလား
3 Re: Trial Version များကို Cracklock ဖြင့် ထိန်းထားခြင်း [Tips & Tricks] on 14th August 2010, 7:52 am
password တွေ ခံထားပီးတော့ ပေးဦးလေ ဗျာ စမ်းကြည့်ချင်လို့ စမ်းကြည့်မလို့ ကို
အကို အားရင် လုပ်ပါဦး
ရသွားပီအကိုရေ Password ကို ...............
4 Re: Trial Version များကို Cracklock ဖြင့် ထိန်းထားခြင်း [Tips & Tricks] on 14th August 2010, 8:25 pm
Install လုပ်ပြီးသွားပြီး နောက်ပိုင်း ၅ ခေါက် Free ပေးဝင်မယ် နောက်ကျတော့
buy ဖြစ်သွားတဲ့ ဟာမျိုးတွေကို ရော လုပ်ပေးထားလို့ ရလား
ရပါတယ် သူက Date & Time ကို Control ပေးတာဆိုတော့ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ရပါတယ် ။
ပိစိလေးရယ်........ [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.]
5 Re: Trial Version များကို Cracklock ဖြင့် ထိန်းထားခြင်း [Tips & Tricks] on 14th August 2010, 8:29 pm
ဟုတ်တယ်ဗျာ ကျွန်တော် မျှဝေချင်ဇောတွေ အရမ်းများပြီး Password ပေးဖို့ မေ့သွားလို့ပါဗျာ
စိတ်ဆိုးကြပါနဲ့နော်........... [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.]
Kaspersky Password: 12345 ပါ [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.]
6 အစ်ကိုရေကူပါဦးဗျ on 24th November 2010, 8:47 am
cracklock manager ကလဲ password တောင်းနေပါတယ်...
7 Re: Trial Version များကို Cracklock ဖြင့် ထိန်းထားခြင်း [Tips & Tricks]